Dulmarka Xarunta / Qalabka | Ota Bunkanomori
Ganacsi kafaala qaaday
Tiyaatarka Farshaxanka ee Internetka
Barnaamijka Taakuleynta Fanaaniinta Da'da yar
Mashruuca Farshaxanka OTA
TOKYO OTA OPERA MASHRUUCA
Naadiga Shimomaruko JAZZ
Ota Ward JHS Dabeylaha Orchestra
Sannad-guurada 30aad ee aasaaskii filimka Ururka "Waxaan helay masraxa weyn!"
TOKYO OTA OPERA MASHRUUCKA 2021 qaybinta duubista tooska ah (waa la dallacay)
Ku saabsan iibsiga tigidhada
Iibso khadka tooska ah
Telefoon ku ballanso
Iibso miiska dushiisa
Tigidhada Khadka Tooska ah ee Ururka Ota Ward
Dhacdooyinka Iskaashi ee Ryuko Memorial Hall Iskaashiga Dhacdooyinka
Barnaamijka farshaxanka fasaxa xagaaga
Bandhigga Bandhigga Wadajirka ee Wadajirka 'Ryuko Memorial Hall'
Warqad macluumaad ah "ART bee HIVE" codsi caymis / bixinta macluumaad
Fagaaraha Daejeon Citizen
Soo dejiso qalabka
Habka codsiga iyo socodka isticmaalka
Kaymaha Dhaqanka Daejeon
Hoolka Xusuusta Ryuko
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee bandhigga
Waa maxay Ryuko Memorial Hall?
4 mashruuca iskaashiga dhismaha "koorsada hall hall"
Warbixinta waxqabadka "Buug xusuus qor ah"
Faallooyinka fiidiyowga ee bandhigyadii hore
Kumagai Tsuneko Hall Hall
Waa maxay Kumagai Tsuneko Hall Hall?
Hoolka Xusuusta Sanno Kusado
Waa maxay Sanno Sosudo Memorial Hall?
Sida loo kireeyo xarun
Sida loo codsado loona isticmaalo
Waa maxay Uguisu Net?
Jilidda khidmadda isticmaalka
Dulmarka guud ee ururka
Dulmarka Guud ee Ururka / Maqaalka Wadajirka
Warbixinta dhaqaalaha / warbixinta ganacsiga
Ku saabsan xakamaynta faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus
Ku saabsan isticmaalka xarunta
Codsiga abaabulayaasha hoolka
Loogu talagalay dadka isticmaala istuudiyaha muusikada
Ka warbixi natiijooyinka sahaminta hawo ee xarun ay maamusho Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ota Ward
Codsiyada dhammaan soo booqdayaasha bandhigyada ay abaabushay ururku
Ku saabsan siyaasada ganacsiga
Ka helay "Abaalmarinta Abuuritaanka Gobollada ee 29 (Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Abaalmarinta Isgaarsiinta)" Ota Citizen's Plaza
Xiriirka dadweynaha / warqadda macluumaadka
Majaladda Macluumaadka ee Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward "Farshaxanka Farshaxanka"
Waa maxay majaladda warfaafinta "Farshaxanka Farshaxanka"?
Majaladda Macluumaadka "Farshaxanka Farshaxanka" Macluumaadka ku saabsan xayeysiinta lacagta la bixiyo
Ota Ward Macluumaadka Farshaxanka Dhaqanka "ART bee HIVE"
Waa maxay warqadda macluumaadka "ART bee HIVE"?
Macluumaad ku saabsan barnaamijka telefishanka ee ku xiran warqadda "ART bee HIVE TV"
Warqad macluumaad ah "ART bee HIVE" Macluumaadka meelaynta xayeysiinta ee la bixiyay
XNUMX jadwalka munaasabada dhismaha
Macluumaadka SNS rasmiga ah
Daejeon Dhaqanka menu
Dulmarka guud / qalabka
Sida masraxa u muuqdo
Qolka ujeedooyin badan
Carwo carwo / laba jibbaaran
Istuudiyaha muusiga 1.2.3
Istuudiyaha isboortiga 1.2
Istuudiyaha Hal-abuurka ah 1.2.3
Qolka u eg Jabbaan
Qolka kulanka / qolka sugitaanka
Macluumaadka xayiraadda la'aan
Ku saabsan macluumaadka xayiraadda
Sida loogu isticmaalo qolka
Marka aad go'aansato inaad isticmaasho
9: 00-19: 00 (geeska buugga iyo geeska warbaahinta badan)
Thursday Khamiista labaad ee bil kasta (haddii ay tahay ciid, Jimcaha soo socda)
・ Fasax-sannadka iyo Sannadka Cusub (Diseembar 12-Janaayo 29)
Period Muddada diyaarinta gaarka ah (1 maalmood gudahood sanadkiiba)
Xarunta macluumaadka si toos ah u wac 03-3772-0740
Geeskani wuxuu leeyahay shaqo la mid ah Maktabadda Ota Ward, oo leh buugaag, joornaallo, CDyo, iyo agabyo la xiriira aagga.
Sidee loo amaahan karaa qalabka markii ugu horeysay
"Ota Ward Maktabada Wadajirka ah ee Kashidashi Card" ayaa loo baahan yahay.
Qof kasta oo ku nool Ota Ward ama haysta safar shaqo ama iskuul ku yaal Ota Ward wuu isticmaali karaa.
Si aad isu diiwaangeliso, waxaa lagu weydiin doonaa inaad muujiso shahaado (liisanka darawalnimada, kaarka caymiska caafimaadka ee caymiska, kaarka aqoonsiga ardayga, iwm.) Oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga.
Kuwii horey uga sameeyay maktabada Ota Ward sidoo kale waxay ku isticmaali karaan hoteelka.
Ku saabsan amaahda
Tirada amaahda: Ilaa 12 buug, joornaallo, bandhigyo sheeko-sawir ah. Ilaa 6 CD.
Muddada amaahda: illaa 2 toddobaad
Tirada kuraasta la eegay
Geeska cilmi baarista
Wargeys / geeska majaladda
34 kursi (oo ay ku jiraan 5 kursi oo mudnaanta PC ah iyo 11 kursi oo PC awood u leh)
Ku saabsan soo celinta qalabka markii matxafku xiran yahay
Fadlan isticmaal "boostada soo celi".
* Fadlan toos ugu soo celi qalabka lagaa dalbaday maktabadda banaanka waaxda si toos ah dariishadda maktabadda la kiraysto.
Haddii aad rabto inaad hesho waxyaabo, fadlan u isticmaal barta kombiyuutarka adeegsadaha.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan si xor ah nala soo xiriir maadaama aan kaa caawin karno.
Haddii aadan haysan agabkii aad dooneysay, waad sii qabsan kartaa ama waad ka dalban kartaa maktabadda waadhka.
Waad baari kartaa oo keydin kartaa qalabka waxaadna ka hubin kartaa macluumaadka shakhsiyeed internetka.
Faahfaahin dheeraad ahBogga hore ee maktabadda Ota Ward Fadlan fiiri
Waxaad la kulmi kartaa nashaadaadyo hal abuur leh sida hawlgalka kumbuyuutareedka aasaasiga ah, sameynta dukumiintiyada, internetka, soosaarida garaafka, iyo sawir / fiidiyooga wax laga beddelayo.
Sida loo Isticmaalo
Fadlan buuxi foomka dalab oo soo bandhig "Kaararka Maktabadda Guud ee Ota Ward" soo dhaweynta.Dhagaystayaasha bartilmaameedku waxay ku egyihiin ardayda dugsiga hoose iyo wixii ka sareeya.
Gees Khibrad (14 baabuur)
Waxaad la kulmi kartaa howlaha aasaasiga ah ee kombiyuutarka, barnaamijyada xafiiska sida Word iyo Excel, iyo barashada softiweerka sida Go / Shogi iyo softiweerka makiinada.
1 saac bilaash ahWaad sii wadi kartaa adeegsiga haddii ay lacag la’aan tahay.
Geeska internetka (6 cutub)
Waxaad kala kulmi kartaa daalacashada bogga hore.
Macluumaadka sida dirista emaylka iyo dhajinta SNS lama soo diri karo.
30-ka daqiiqo ee hore waa bilaash, 30-ka daqiiqo ee hadhayna waxay noqon doonaan 100 yen oo dheeraad ah.
Geeska waxqabadka hal abuur (2 cutub)
Iyada oo qeexitaannada qashinka ah ee Win iyo Mac kasta, waxaad ku qaban kartaa waxqabadyo hal abuur leh sida soosaarida garaafka iyo sawir / sawir muuqaal ah.Word, Excel, Photoshop iyo Illustrator ayaa la soo saaray.
Waxay noqon doontaa 2 yen 200 saacadood gudahood.
Waad daabacan kartaa. (A4: Monochrome 10 yen, Midab 30 yen)
Xusuusta USB ayaa loo isticmaali karaa. (Fadlan skaanka iskaanka iska qaad intaadan isticmaalin)
Ma jiro macallin sharxaya hawlgalka. (Fadlan isticmaal qoraalka la bixiyay)
Wi-Fi bilaash ah
Macluumaadka isku xirka
Waxaa loo dejiyay ujeedada bixinta adeegga isku xirka internetka si loogu taageero cilmi baarista iyo barashada kuwa isticmaala xarunta macluumaadka.
Wi-Fi-kan waxaa la heli karaa inta lagu jiro saacadaha furitaanka ee geeska maktabadda iyo geeska warbaahinta badan.
Haddii aad leedahay terminal isgaarsiineed oo ku xirmi kara wireless-ka LAN, waxaad ugu isticmaali kartaa bilaash.
Taxaddarrada ku saabsan isticmaalka
Si aad u isticmaasho adeegga, waxaad u baahan tahay inaad oggolaato shuruudaha adeegga ee japan ku xiran Wi-Fi bilaash ah.
Wi-Fi looma xirin sirta si aad si fudud ugu isticmaali karto. Fadlan adeegsiga u adeegso qatartaada darteed, sida inaadan galin macluumaadkaaga shaqsiyeed sida ID, password, kaarka deynta, iwm.
Adeegga waxaa laga yaabaa inaan la helin sababo la xiriira dayactirka qalabka, iwm.
Markaad adeegsanayso adeeggan, hudheelka mas'uul kama noqon doono wixii waxyeelo ah ee soo gaadha adeegsadaha ama dhibaatooyinka soo gaadha dhinacyada saddexaad.
143-0024-2, Bartamaha, Ota-ku, Tokyo 10-1
* Codsi / lacag bixin qol kasta oo xarun ah 9: 00-19: 00
* Boos celinta / bixinta tigidhada 10: 00-19: 00
Dayactirka / maalinta kormeerka / nadiifinta xiran / ku meelgaarka u xiran
Boos celinta telefoonka
Xuquuqda qoraalka (C)
Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward.